Nakatonin'i New Caledonia ny toeram-bahoaka noho ny Covid-19
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nakatonin'i New Caledonia ny toeram-bahoaka noho ny Covid-19
nanidy ny toerana ho an'ny besinimaro i caledonia vaovao noho ny covid 19
Ny governemanta New Caledonian dia nanafatra ny fanidiana azy ireo nanomboka ny alim-baravarana teo amin'ireo toerana natokana ho an'ny daholobe, toy ny trano fisakafoanana, bar, nakamaly ary trano filokana mandritra ny roa herinandro. Hetsika vaovao marobe no efa nambara taorian'ny naharenesana olona roa voan'ny coronavirus omaly.
Hofoanana ny fivorian'ny olona mihoatra ny 20 ary tsy maintsy foanana ny hetsika rehetra toy ny hetsika ara-panatanjahantena sy fiangonana. Hakatona ny sekoly ary koa institiota fanofanana sy oniversite.
Hatsahatra ny fitateram-bahoaka mankamin'ny Nosy Loyalty. Ny filoha Thierry Santa dia nanentana ny mpampiasa handamina ny asa hatao any an-trano raha azo atao.
Tsy avela hiditra ao New Caledonia ny tsy mponina raha hijanona kosa ny fifamoivoizana ataon'ireo mpandeha eo anelanelan'i New Caledonia sy Wallis ary Futuna.
Mandritra izany fotoana izany, ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay Annick Girardin dia nanoro hevitra ny olona avy any amin'ny faritany ampitan-dranomasina frantsay monina any France mba tsy hiverina any amin'ny nosy niaviany. Na izany aza, nilaza izy fa ny olona mipetraka any amin'ny faritany ampitan-dranomasina izay sendra tany Frantsa dia afaka niverina nefa iharan'ny fitokantanan-tena henjana rehefa tonga. Ramatoa Girardin dia nilaza fa ny zotram-piaramanidina fototra dia mahazo antoka amin'ny alàlan'ny mpitatitra.
Tsy misy mpizahatany intsony ao Frantsa: Maka ny hotely Paris ireo tsy manan-kialofana
Nofoanan'ny Fikambanana fizahan-tany any Pasifika ny SPTE 2020